Osisi ndị Brazil nọ n'ihe egwu nke mkpochapụ | Njem zuru oke
Daniel | 15/04/2021 12:23 | Emelitere ka 15/04/2021 13:23 | Brasil
Brasil Ọ na-abụ obodo kachasị acha akwụkwọ ndụ na South America, ala nwere oke oghere dị egwu na ọtụtụ ụdị dị iche iche. Agbanyeghị, akụnụba a dị egwu na-eyi egwu, ọkachasị ndị flora nke ndị Brazil.
Otu nnyocha emere n'ime afọ ụfọdụ na mba South America mere atụmatụ ọnụọgụ nke ụdị osisi dị egwu na 2.118. Ọbụghị naanị nke ahụ: kwa, dị ka onye ama ama ama na Brazil Gustavo Martinelli, onye nhazi nke Akwụkwọ Red nke Flora nke Brazil (2013), ndị ọnụego mkpochapu nke umu ihe di ocha karie ka esi chee na aro ole na ole gara aga.
Martinelli nọ na-arụ ọrụ titanic nke ịkọwapụta na ịhazi ọkwa ahịhịa ndụ nke Brazil. A na-echekwa mgbalị ha iji mee ka ọha mmadụ mara na ndị ọchịchị gbasara mkpa mkparịta ụka gbasara akụ a.
Ọtụtụ ụdị nke Brazil flora na-gụnyere Ndepụta Red nke International Union for Conservation of Nature (IUCN). Agbanyeghị, na nyocha ọhụrụ, ndepụta ahụ dị ọtụtụ.
Ndị ọkachamara kwuru na ha ka na-ezo n’oké ọhịa ndị dị na Brazil ọtụtụ ụdị ndị a na-achọpụtabeghị. Speciesdị a nwere ike ịdị n'etiti 10% na 20% nke ezigbo osisi Brazil. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọnụego njirimara nke ụdị ọhụụ dị nnọọ nwayọ karịa ọnụọgụ nke ụdị anụ a maara.
na ihe kpatara oke ikpochapu mmadu a maara nke ọma. Enwere ike ichikota ha n'ime ato:
Achọghị iche maka ọrụ ugbo.
Mkpochapu osisi na mmepe obodo nke oghere ọhụrụ.
1 Plantdị osisi egwu na Brazil
1.1 Andrequicé (Aulonemia isi)
2 Zọpụta osisi ndị Brazil
Plantdị osisi egwu na Brazil
A na-ekewa ụdị osisi ndị ahụ a na-atụ ụjọ nke osisi Brazil ìgwè anọ dị ka ọkwa iyi egwu. Emeela nhazi a dabere na njirisi ọnụọgụ nke ịda mba, ọnụọgụ ndị mmadụ, mpaghara nke nkesa oke ala yana ogo nke ibe mmadụ.
Nke a bụ ndepụta dị nkenke nke ụdị ihe atụ kachasị dị egwu na-eyi egwu:
Ejikwa aha ndi ozo dika campinchorâo, aveia emechiri o samambaia Indiana. Ọ bụ osisi nwere ọdịdị achara dị ka ọdịnala na-eto na mpaghara mpaghara Brazil. Taa ọ nọ n'oké ihe ize ndụ.
Otu n'ime ụdị anụmanụ nọ n'ihe ize ndụ na Brazil bụ kpọmkwem ihe na-enye mba a aha ya. Ndị bi na Portuguese ji osisi ya mee ihe maka imepụta agba na imepụta ụfọdụ ngwa egwu.
Alaka nke Jacaranda de Baia
Osisi Endemic nke osisi Brazil nke osisi ya dị oke mkpa. Ichebe osisi na-enweghị oke belata ọnụ ọgụgụ nke ụdị nke ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oke.
Osisi shrubby na-amị mkpụrụ osisi nwere ọtụtụ uru ahụike. Osisi a, nke sitere n'otu ezinụlọ dịka osisi mulberry, nọ n'ihe ize ndụ nke ịla n'iyi na Brazil.
The paininha ya na-enwu gbaa ọbara ọbara na-acha odo odo okooko osisi. Speciesdị dị n'ihe ize ndụ.
Osisi nwere okooko osisi mara mma nke na-acha uhie uhie na odo nke ndi mmadu bi na mpaghara ala gbara ala nke oma.
Subsdị osisi nkwụ nke nwere adaka dị mkpụmkpụ nke na-eto n'akụkụ ụfọdụ nke ndịda nke mba ahụ. Nnukwu osisi nkwụ nke oge gara aga na-ejedebe taa maka ọnụnọ ịgba ama.
Pinheriro do Paraná ma ọ bụ Araucária: firusi "Brazil" nke nwere ike ịnwụ.
Pinheiro ke Paraná (Araucaria angustifolia)
Osisi umu nke ndi ezi na ulo Auraucariaceae edepụtara dị ka osisi na-adịghị ike. Osisi Brazil a, akpọkwara curi, Ọ nwere ike iru mita 35 n'ịdị elu. Na mbu ọ gbatịrị n'ụdị oke osisi nwere ebe ndịda nke mba ahụ. Ndaghachi ya n’ime iri afọ ndị na-adịbeghị anya dị egwu.
Sangue de Dragāo (Helosis cayennensis)
Osisi sitere na mpaghara Amazon nke ejiri uhie ya, nke yiri ọbara, mee ọtụtụ ihe ahụike na mma.
Chika OkpalaCamarea hirsuta)
Osisi "ojii ojii" a ma ama, nke bara ụba nke ukwuu, furu efu na mba ahụ.
Hairy, osisi na-achọ izighi ezi
Pink-flowered osisi nke isi njirimara ha bu azuokokoosisi ya na "ntutu" ya. Otu narị afọ gara aga ka ekesara ya ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mba ahụ dum, taa ọ bụ naanị na-adịgide ndụ na mpaghara ụfọdụ echedoro.
Zọpụta osisi ndị Brazil
Okwesiri ikwu na a na-eme atụmatụ ndị dị mkpa iji chekwaa osisi Brazil. Brazil bụ onye binyere aka na nke Nkwekọrịta maka ihe dị iche iche dị iche iche na ndụ Aichi (2011), nkwa siri ike nke mba ụwa iji gbochie mkpochapụ nke ụdị egwu.
N'ime ọtụtụ usoro ndị ọzọ, gọọmentị etiti bipụtara afọ ole na ole gara aga a mkpa ebe map, ọtụtụ n'ime ha enwetaworị a ọnọdụ nchedo pụrụ iche. Ma ọ bụghị naanị iji chekwaa flora, kamakwa ụmụ anụmanụ nke mba ahụ.
N'ime oru nchekwa ndia niile, ndi nkà na ụzụ na-arụ ọrụ dị mkpa. Ekele ya, ọ ga-ekwe omume ịchekwa mkpụrụ nke osisi ndị a na-eyi egwu maka iji ya mee ihe n'ọdịnihu na ebe obibi ndị agbakeghachi.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Osisi ndi Brazil no na onwu
Ahuru m lino n'anya
Ọ D ME M KA HA NA-EMEGH THE Ozi ahụ
GYN THEY B THEY OTU N’IME M
IWU NA LAPUTA
Achịcha achịcha Dutch na confectionery